Nhau - Ungasarudza sei yekupenda pendi bhurashi kune vanotanga?
Acrylic Paint Brashi
Yakanaka Tsanangudzo Paint Brush
Mafuta Paint Brush
Watercolor Paint Brashi
Kolinsky Chipikiri Brush
Nzira yekusarudza yakanakisa yekupenda bhurashi kune vanotanga?
Mhando dzemhando yepamusoro yekupenda mabhurashi atinowanzoshandisa mukupenda ndeaya anotevera: Rudzi rwekutanga ndeyakasikwa fiber, inova bristles. Kusanganisira bristles, mhumhi bvudzi, mink bvudzi uye zvichingodaro. Chikamu chechipiri chemakemikari fiber. Isu tinowanzo shandisa nylon.
Nyowani nyowani yekupenda bhurashi inotengwa kuti iite imwe yakapusa kugadzirisa. Kana iri yakasarudzika fiber pende bhurasho, mamwe acho anonamirwa. Rudzi urwu rwebrashi yependi inogona kunyoroveswa mumvura inodziya kwemaminitsi gumi nemashanu uyezve zvinyoro nyoro. Mushure mokunge bvudzi rebhurashi rasunungurwa, suka glue rakasara nemvura yakachena. Kana iro bhurasho risina kunamirwa, rinogona kushandiswa zvakananga, asi zviri nani kusuka nemvura kuti ubvise bvudzi rinoyangarara pabhurasho. Natural fiber artiest kupenda mabhurashi anosanganisira akanaka tambo dzakadai seyemink bvudzi, mhumhi bvudzi, nezvimwewo, pamwe neakakura fiber mabhurashi akadai mabristles.
Iyo bhurashi tambo dzemakemikari tambo dzinowanzo kuve dzakaonda, uye kusimba kunosiyana zvakanyanya zvichienderana nerudzi. Nekudaro, iyo yekubata kazhinji haina kukodzera, uye inokodzera kuumbwa kwakanaka. Sarudzo yemabhurashi yakanyanya zvinoenderana nezvinodiwa nemunyanzvi uye nehunyanzvi hwake.
Iyo gobvu-fiber bristle artiest kupenda bhurasho ine elasticity yakanaka, uye mabrashi mabrashi e bristle ari pachena, ayo anofambisa kuunganidzwa kwe pigments kuumba iwo maitiro ekugadzirwa. Iyo bhurasho bristle haina kukodzera kudzokorora kunyorera. Nekuda kwekusimba kwayo kusimba, zvine njodzi kuramba uchidzora pajira rependi risati raoma. Kunyanya kana yepazasi vara rejira yakatetepa kwazvo, nerubatsiro rweye solvent yepakati, zviri nyore kukwenya pasi pevara rukoko uye kufumura pasi pependi.
Kolinsky pendi bhurasho
Brushes senge kolinsky bvudzi uye mhumhi bvudzi zvine yakanaka absorbency uye hazviwanzo kutarisana nezviri pachena sitiroko. Iwo ari nyore kubatanidza uye akakodzera kudhirowa akaomesesa uye akaomesesa echinyakare kupenda. Aya mabhurasho akakodzera kwazvo kune mutete kunyorera nekuda kwekushomeka kwavo kusimba asi kugona kwakanyanya. Kunyanya yakakura-nzvimbo yekuvhara-yakashongedzwa nylon mabhurashi ane yakasarudzika kusimba uye inogona kutora mamwe akajeka uye ane simba sitiroko mukuita kwekutsvaira kuratidzwa.
Kero: Kwete 1 Aixihu Maodzanyemba Mugwagwa Qingshanhu Ruwa Nanchang Guta Jiangxi Provience, 330095